Tag: dhibcaha hogaanka | Martech Zone
Tag: dhibcaha hogaanka
Deegaanka ayaa si degdeg ah isu beddelaya suuqgeyneyaasha. Cusbooneysiinta cusub ee diiradda saarey sirnimada ee macruufka ee Apple iyo Chrome baabi'inta cookies-ka dhinac saddexaad ee 2023 - iyo isbeddellada kale - suuqleydu waa inay la qabsadaan ciyaartooda si ay ugu habboonaato xeerar cusub. Mid ka mid ah isbeddelada waaweyn waa qiimaha sii kordhaya ee laga helo xogta xisbiga koowaad. Calaamaduhu waa inay hadda ku tiirsanaadaan ka-qaybgalka iyo xogta kooxda koowaad si ay u caawiyaan wadista ololaha. Waa maxay Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV)? Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV)